मुलधारको मिडिया या ब्लग दुबैमा उति नै अध्ययन, अनुसन्धान र गम्भिरता चाहिन्छ: रविराज बराल - MeroReport
मुलधारको मिडिया या ब्लग दुबैमा उति नै अध्ययन, अनुसन्धान र गम्भिरता चाहिन्छ: रविराज बराल
'मिडियाको विद्यार्थी हुँ, मिडिया मेरो रहर हो । यहाँ धेरै कुरा जान्न मन छ । सिक्ने रहर मार्न नसकेर पत्रकारिता गरिरहेको छु र यसैबाट मेरो जीवन निर्वाह पनि हुन्छ । रहर नपुगेर ब्लगिङ गर्न थालेँ । कसरी चिन्ने तपाईँकै जिम्मा !' सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा ब्लगरका रुपमा या पत्रकारका रुपमा? भन्ने शुरुवाती प्रश्नको जवाफ यसरी दिएका लेखनाथ ६ अर्चले, कास्कीका स्थायी वासिन्दा रविराज बराल रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारितामा एमए दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । अध्ययनका अलावा पत्रकारका रुपमा उज्यालो ९० नेटवर्कमा कार्यरत बराल न्युमिडिया एवं सामाजिक संजालमा समेत उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । @rabirajbaral हेण्डलवाट ट्विटरमा सक्रिय बराल मिडिया कुराकानी भन्ने ब्लग समेत संचालन गर्छन् जसमा उनको प्राथमिकता मिडिया नै परेको स्पष्ट देखिन्छ । मिडिया अध्ययन अनुसन्धानमा बिशेष रुची राख्ने बराल आफुलाई Freelance Content Writer भनेर समेत चिनाउन मनपराउँछन् । इन्टरनेटमा रमाउन, अध्ययन अनुसंधान गर्न र ब्लगमार्फत नयाँ कुराहरु बाँड्न आतुर यिनै रविराज बराललाई मेरो रिपोर्टको नियमित स्तम्भ साताका ब्लगरमा यो साता हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । प्रस्तुत छ यिनै रविराज बरालसंग पवन न्यौपानेले गरेको कुराकानी:
Comment by Binaya Shekhar on April 4, 2013 at 12:45pm
Badhai Chha Rabi jee. You are doing really well through using social media & technology make journalism profession more responsible.
Comment by Prakash Lamichhane on March 13, 2013 at 8:10pm
बधाइ छ रविराजजीलाइ धेरै धेरै ।
Comment by Rabi Raj Baral on March 13, 2013 at 7:59pm
बधाई सहित मेरो हौसला बढाउने सबैलाई मेरो नमस्कार । सल्लाह/ सुझाव/ सहयोगको अपेक्षा गर्छु । :)
Comment by Pagal Basti on March 13, 2013 at 6:49pm
रबि सरलाई बधाइ
Comment by अल्टर कान्छो’ on March 13, 2013 at 4:21pm
मिडिया मेरो रहर हो । त्यसैले ब्लगको विषयवस्तु छान्दा म मिडियाकै सेरोफेरो हेर्छु । वृहद् अर्थमा मिडिया भन्दा हामी जे बुझ्छौँ ति सबै मेरा विषयवस्तु हुन् । त्यसो भन्दैमा सबैकुरा जानिन्छ भन्ने छैन । जति जानिन्छ, त्यति लेखिन्छ । नजानेको सिकिन्छ, पढिन्छ र लेख्ने कोशिष गरिन्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको छैन तर अध्ययनका क्रममा भेटेका, देखेका कुरा नै ब्लगमा लेख्ने कोशिष गर्छु । साताको हुन सफल
लाई हार्दिक बधाइ
Comment by Ujjwal Acharya on March 13, 2013 at 3:37pm
मिठो कुरा रबि ! मलाई सबै भन्दा मन परेको चाही यो हो :
"लेख्न चाहनेहरुले अरुको पढ्नुपर्छ । लेखिरहेकाहरुले सिक्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सिकाउने, आलोचना गर्ने र आलोचना स्वीकार्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । सिक्ने सिकाउने वातावरण बनाउनपर्छ ।"
Comment by pawan neupane on March 13, 2013 at 3:23pm
Congratulation Rabi Ji :):)